Yael Zlatin Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Yael Zlatin
Yael ndiye Mutungamiriri weE-commerce ye Adtaxi. Ane makore ekuratidza budiriro mukuvaka yakabudirira shanduko fanera uye ari anofambira mberi mutungamiri mutungamiri uye chipangamazano wekudzidzisa, kutungamira uye kukurudzira zvemukati uye chaiwo zvikwata.
Muvhuro, Mbudzi 25, 2019 Muvhuro, Mbudzi 25, 2019 Yael Zlatin
Nguva yezororo iri zviri pamutemo pano, uye iri kuumbika kuve imwe yeakakura pane ese akanyorwa. Na eMarketer kufanotaura zvekutengesa e-commerce kushandisa kudarika $ 142 bhiriyoni mwaka uno, pane zvakawanda zvakanaka zvekutenderera, kunyangwe kune vashoma vatengesi. Ihwo hunyengeri hwekugara uchikwikwidza kuve nehungwaru nezve kugadzirira. Sezvineiwo unenge watotanga kuita izvi, uchishandisa mwedzi mishoma yapfuura kuronga mushandirapamwe wako uye kuvaka mazita uye mazita evateereri.